Xog:- Guul-wadeyntii oo kusoo dhamaatay kama dhoofi kartid garoonka Aadan Cadde | Arrimaha Bulshada
Home News Xog:- Guul-wadeyntii oo kusoo dhamaatay kama dhoofi kartid garoonka Aadan Cadde
Xog:- Guul-wadeyntii oo kusoo dhamaatay kama dhoofi kartid garoonka Aadan Cadde
Bulsha:- Siyaasiyiin kamid ah kuwa sida weyn ugu dagaal galay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday iyo damaciisa shaqsiyeed ayaa maalmihii u dambeeyay wajahayay bahdil xoogan.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo Guddoomiye ku-xigeenka dhanka Amniga ee gobolka Banaadir oo 13 iyo 14 bishaan doonayay inay ka duulaan garoonka Muqdisho, si ay u doontaan kuraas ay hunguriyeynayeen ayaa laga hor istaagay.
Bahdilka iyo is-hortaaga lagu sameeyay Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey iyo Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare) ayaa waxaa ka dambeeyay sida ay sheegen madaxda Koonfur Galbeed iyo Galmudug.
Lafta-gareen iyo Qoor Qoor ayaa waxay xulafo siyaasadeed la yihiin madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday, hase yeeshe midaasi waxba uma tarin raga sanadaha badan u sacabo tumayay Farmaajo.
Dadka falanqeeya siyaasada ayaa arrintan ku macneeyay mid laga baran karo cashir, una noqoneyso duruus ay tahay inay si fiican u dhugtaan raga uu waqtiga kaga dhamaaday difaaca iyo guul-wadeynta madaxda xilka haysa.
Labada Nin ayaa sida muuqata hadda ku baxay in danihii Farmaajo-Fahad iyo damacooda siyaasadeed isku meel-mari waayay, waxaana Farmaajo-Fahad ka go’an inay ka cag wareejiso cidkasta, xataa haddii uu yahay guul-wadaha xulafada.
Kuraasta ay rabeen Cabdiweli Muudey iyo Cali Yare Cali ayaa waxaa lasoo warinaya in si gaar ah loogu xiray Maxamed-weli Cabdullaahi Sheekh oo reer Australia
iyo Mahad Salaad.
Si kastaba, arrimahan ayaa imanaya xili laga deyrinayo doorashada Golaha Shacabka, oo noqotay mid magac u yaal ah, maadama inta badan xildhibaanada kusoo baxay kuraasta la doortay ay yihiin kuwo markii horeba loo xiray oo lasii ogaa.